Gabar Shan jir ah oo lagu kufsaday magaalada Muqdisho - Awdinle Online
Wararka Shabakadda Awdinle Online ka heleyso Magaalada Muqdisho ayaa waxaa ay sheegayaan in Gabar yar oo da’deedu tahay shan sano jir lagu kufsaday degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir.
Aabaha dhalay Gabadha oo lagu Magacaabo Yuusuf Maxamed oo warbaahinta kula hadlay hoygiisa ayaa sheegay in Gabadha Kufsi loogu geystay bannaanka Gurigooda, isla markaana Isbsitaalka digfeer la geeyay gabadha sidaasina lagu xaqiijiyay inuu jiro kufsi loo geystay dhibbanaha.
Gabadha eedadeed oo iyadana warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay inay qoysku kusoo baxeen qeylada gabadhooda yarta, waxayna u yimaadeen iyadoo la kufsaday.
“Waxaan kusoo baxnay qeylada gabadha, markii aan bannaanka usoo baxnay Ayaan aragnay gabadha oo ooyaysa, markaan u tagnay ninkii falkaan geystay, wuxuu noogu hanjabay inuu na dilayo,” ayay tiri Eedada gabadha la kufsaday.
Ninkii falkaan ka dambeeyay oo sidoo kale jirdil u geystay gabadha hooyadeed ayaa la sheegay inuu ka baxsaday goobta uu falka ka geystay oo ahaa guriga uu degen yahay oo ku yaala xaafada Faanoole oo katirsan degmada Kaaraan.
Maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaa Magaalada Muqdisho kusoo badanaya Kiisaska kufsiyada, waxaana todobaadyo gudaheed ka dhacay kufsiyo aad u fool xun oo loo geystay dumar iyo rag.
Previous articleXOG: Goormee Golaha Shacabka la horgeynayaa Ra’iisul Wasaaraha Magacaaban
Next articleC/raxmaan C/Shakuur” Soomaaliya waxaa laga badbaadiyay dhibaato kusoo wajahneyd